Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Vaksiny: 80% -97% ny any Afrika no sahirana ary toy izany koa ny fizahantany
Ny vaovao mahatsiravina ho an'i Afrika dia ny vaovao tsara avy amin'ny World Health Organization. Afrika dia mahazo ny vaksininy, fa ny dosie 90 tapitrisa kosa dia hikarakara ny 3% amin'ny mponina fotsiny.
Vonona hiatrika ny vaksinin'ny COVID-19 i Afrika
Ny vaksinin'ny AstraZeneca / Oxford AZD1222 dia mipaka any Afrika
Ny fatra 90 tapitrisa voalohany fa ny 3% -n'ny mponina afrikanina ihany
20% afrikanina ihany no antenaina hatao vaksiny amin'ny 2021
IZA no namoaka azy ho vaovao tsara, raha ny tena izy dia toa nahazo ny tapa-kazo fohy i Afrika raha ny fahazoana ny vaksinin'ny Coronavirus.
Mpitondra tenin'ny Boar ny fizahantany afrikaninad mieritreritra fa vaovao mahatsiravina ho an'ny kaontinanta ity ary vaovao ratsy kokoa aza ho an'ny toekarena fizahantany amin'ity taona ity.
Matshidiso Moeti, talem-paritry ny OMS ho an'i Afrika, dia nanasongadina fa ny fametrahana dia “dingana voalohany manakiana” hiantohana ny fahazoan'ny firenena vaksininy.
“Nijery faritra hafa i Afrika nanomboka ny fampielezana vaksinin'ny COVID-19 hatry ny ela. Ity famolavolana nomanina ity dia dingana voalohany iray lehibe hijerena ny kaontinanta hahazo fidirana ara-drariny amin'ny vaksininy ", hoy ny Dr. Moeti.
Ny famoahana ny vaksinin'ny AstraZeneca / Oxford AZD1222 dia iharan'ny lisitr'ireo vaksininy ho an'ny fampiasana vonjy maika hataon'ny WHO, izay eo am-pandinihana ny vaksininy ary antenaina ho avy tsy ho ela ny tohiny, hoy ny masoivoho.
Ao anatin'ny fangatahana vaksinin'ny COVID-19 dia miorina amin'ny fahaizan'ny mpamokatra vaksinina sy ny fahavononan'ny firenena, hoy ihany ny WHO, izay nanamarika fa ny firenena mpandray dia takiana amin'ny fametrahana drafitra famindrana firenena sy drafitra fanaovana vaksiny mba hahazoana vaksinin'ny COVAX toerana.
Ny fatra 90 tapitrisa voalohany dia hanohanana ireo firenena nanindrona 3 isanjaton'ny mponina Afrikana mila fiarovana indrindra, anisan'izany ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo vondrona marefo hafa amin'ny tapany voalohan'ny taona 2021.
Rehefa mihabetsaka ny fahaizan'ny famokarana ary misy vaksiny maro kokoa azo atao, ny tanjona dia ny fanaovana vaksiny farafahakeliny 20 isan-jaton'ny Afrikanina amin'ny fanomezana fatrany hatramin'ny 600 tapitrisa amin'ny faran'ny 2021.
'Miezaha ho vonona'
Nilaza koa i Dr. Moeti fa ny fanambarana dia ahafahan'ny firenena Afrikanina mandanjalanja tsara ny drafitra ataon'izy ireo ho an'ny fampielezana vaksinin'ny COVID-19 ary niantso ny firenena hamita ny drafitry ny fiarovam-pananahana.
“Mamporisika ny firenena afrikanina izahay hivoatra amin'ny fahavononany ary hamita ny drafitra fametrahana vaksinim-pirenena. Ny rafitra mifehy, ny rafitra mangatsiaka ary ny drafitra fizarana dia mila apetraka mba hiantohana faingana ny vaksinina hatrany amin'ny seranan-tsambo hiditra amin'ny fanaterana », hoy ihany izy.
“Tsy afaka mandany doka tokana isika.”
Ho famenonan'ny ezaka COVAX, ny Vondrona afrikanina dia niantoka fatra vaksiny 670 tapitrisa ho an'ny kaontinanta izay haparitaka amin'ny 2021 sy 2022 satria ny firenena dia mahazo famatsiam-bola ampy, hoy ny WHO.
Ho fanampin'izany, manodidina ny 320,000 dosi ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech, izay efa nahazo ny fampiasana vonjy maika WHO, dia natokana ho an'ny firenena afrikanina efatra - Cabo Verde, Rwanda, Afrika atsimo, ary Tonizia - izay manana magazay mitahiry sy mizara fatra ao amin'ny minus 70 degre Celsius, hoy ity masoivoho ity.
Ny Facility COVAX
Ny COVAX Global Vaccines Facility dia andry vaksinin'ny ACT-Accelerator, hetsika natomboka tamin'ny volana aprily 2020 mba hanafainganana ny fivelarana fanafody hitsaboana COVID-19 ary hahafahan'izy ireo ho hitan'ny olona na aiza na aiza.
Ny hetsika manerantany dia tarihin'ny WHO; Gavi ny Vaksinin'ny Vaksinina; ary Ny fiaraha-miasa ho an'ny fanavaozana ny fiomanana amin'ny valanaretina (CEPI). Izy io dia miasa mba hiantohana ny firenena maro araka izay tratra hiara-miasa amin'ny fampandrosoana, famatsiana ary fizarana vaksinin'ny COVID-19.
Ny Alemanina sy ny Australiana dia mifankatia mandra-pahafatiny